शिकार र माछा मार्ने | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: शिकार र मत्स्य पालन
मलाई बताउनुहोस् कुन सर्तको स्याट राम्रो छ एक निक्फिन चरम2वा3र किन मूल्य भन्दा अन्य?
मलाई भन्नुहोस् कुन हिउँदको सूट नोरफिन चरम २ वा take लिनु राम्रो हो र किन मूल्य बाहेक? यदि आवश्यक भएमा, मसँग भएको कुराबाट मेरो पोष्ट समाप्त हुन्छ। अधिक व्यावहारिक र सुविधाजनक। तर यदि…
कस्तो प्रकारको गोली 60 को दूरीमा एक भाँडामा प्रभावकारी हिट हुनेछ। 30x06 वा 12 क्याल।
कुन बुलेट bear० मिटरको दूरीमा भालुमा हिर्काउन अझ प्रभावकारी हुनेछ। 60x30 वा 06 क्यालोरी। यहाँ पढ्नुहोस्: भालु ब्लम एम पुस्तकालयको शिकार बिना हतियार र कारतूसहरू बिना ... ती बेचिएका मध्ये ...
मास्कोमा बन्दूकहरू कहाँ लक्षित गर्न सक्छ?
तपाईं मस्कोमा शिकार हतियारहरू कहाँ खिच्न सक्नुहुन्छ? विन्डो खोल्न सकिन्छ। यहाँ केहि जानकारी यहाँ छ: http://talks.guns.ru/forum/44/68025.html निर्देशांक, फोन, उपस्थिति, पासवर्ड। Kutuzovskiy मा निलो फ्ल्याशिंग बत्तीको साथ लक्ष्यहरू सार्दै। हाल ...
कताई, बहादुर रेखा वा कोर्डको लागि के राम्रो छ?
कुन कताई कताई, ब्रेडेड लाइन वा कर्डको लागि राम्रो छ ?? यो भन्न गाह्रो छ कुन राम्रो छ, तपाईंले x तुलना गर्नु हुँदैन। ... ट्राम ह्याण्डलको साथ, सबै चीजहरूको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ। Tyrolka साथ खैरो माछा मार्न जब यो महत्वपूर्ण छ ...
डुङ्गाको पीवीसी कसरी गर्ने भनेर सिकाउनुहोस्
कसरी PVC डु correctly्गा सही ढंगमा तह लगाउने बारे सिकाउनुहोस्। फिर्ताको लाइनमा पम्प गर्नुहोस् र हावा बाहिर पम्प गर्नुहोस्, र सबै डु .्गाले ट्रान्सम बोर्ड पहिले ब be्गाउन सुरू गर्दछ। सजिलो, हामी यो २ 25 सेकेन्डमा स collect्कलन गर्दछौं।
क्यापको साथ माछा माछा निषेध गरिएको छ
के यो केपले माछा मार्न निषेध गरिएको छ? यद्यपि ट्याकल साइजमा सानो छ, तर यो आकर्षक छ। इको ध्वनी र डु boat्गा प्रयोग गरेर, तपाईं माछालाई मुक्तिको कुनै सम्भावना छोड्नुहुन्न। यो सानी केटी होइन! खुल्ला ...
एक क्लच के छ र यसलाई कसरी स्थापित गर्ने?
क्लच के हो र यसलाई कसरी सेट अप गर्ने ??? घर्षण क्लच स्पिनि re रीलको ड्रम (स्पूल) को ब्रेक हो। रेखा र रडको बलमा समायोजन गर्दछ। यहाँ, यहाँ अधिक विस्तारमा: http://www.youtube.com/watch?v=9VhDaiY5jS4 / उहाँ माथि हेर्नुहोस् ...
माछा मा कस्तो प्रकारको रातो कीड़े
माछामा रातो कीराहरू के हुन्? म उत्तर RYBOLOV =) मा जोड्न सक्छ) यदि गँड्यौलाहरू मांसपेशिहरुमा छन् भने, यो फिलोमेट्रोसिस हो, फिलेमेट्रिया गँड्यौला। यो मानवका लागि खतरनाक छैन, तर माछाको प्रस्तुति बिगार्छ र ...
राइफलको लागि इजाजत पत्र।
राइल्ड हतियार अनुमति। त्यहाँ सबैको लागि एकसमान मापदण्डहरू छन् .. पुलिस स्टेशनमा फेला पार्नुहोस् - त्यहाँ यसका लागि विशेष रूपमा विनियोजित व्यक्तिहरू छन् .. हो, प्रक्रिया उस्तै हो जब सहजको लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्दा ...
ताल भाँडामा लिदै र माछा बृद्धि गर्दै ... के मैनबत्तीको मूल्य छ?
ताल भाँडामा लिदै र माछा बृद्धि गर्दै ... के यो मैनबत्तीको लायक छ? पक्कै पनि यो छ। तपाईं बस त्यो तालको नजिक बस्नुपर्दछ र धेरै काम र समय राख्नु हुन्छ ताकि त्यहाँ माछा र नाफा छ !!
कसरी शिकारको लागि घर बनाउनु हो?
कसरी घर बनाउने शिकार स्कीहरू बनाउने ?? केवल पसलमा जानुहोस् र किन्नुहोस्। तिनीहरू धेरै महँगो छैनन्। यदि तपाइँ यो कसरी गर्ने जान्नु हुन्न र यसलाई हेरेको छैन भने, कुनै अनुभवी व्यक्ति नजिकै छैन ...
क्रान्तिको कति लामो समयसम्म चल्छ?
कार्प स्प्यान कति लामो हुन्छ? अधिक स्मार्ट लेखहरू पढ्नुहोस्। विशेष गरी ती इचथोलोजिष्टहरू जसले एक अर्काको डाटालाई पुन: लेख्छन्, र क्रुशियन कार्पलाई केवल बाल्यावस्थामा देखेका थिए (र त्यसपछि पनि सबै होइन) ...
ब्लोब्याक प्रणाली। शटर रोलब्याकको नक्कलको अतिरिक्त, ब्लोब्याक प्रणालीले पीपीए-के मशिन गन (जुन देवदार जस्तै हो) मा स्वचालित मोडमा फायरि when गर्दा संयन्त्रले कार्य गर्न अनुमति दिन्छ, ग्यास खपत कम छ। जब निकालिएको छ, भाग ...
केरा, बिरालो, रोल, ब्रेड के हो
स्कूलमा कर्ब, एक नदी खोला, रोल, ब्रेड के हो भनेर केहि बताउँदछ, म पहिले नै बिर्सिसकेको छु। मौसम र मौसमको आधारमा पाइक पर्चले सूचीबद्ध कुनै पनि स्थानमा राख्न सक्दछ ...
मोटरको साथ रबर डुङ्गाको लागि कागजात वा अनुमति
कागजात वा मोटरको साथ रबर डु boat्गाको लागि अनुमति यदि डु itself्गा आफै २०० किलोग्राम भन्दा कम तौलको छ र मोटर १० घोडाहरू भन्दा कम छ भने, दर्ता गर्न आवश्यक छैन, horses भन्दा बढी घोडाहरूको आन्तरिक दहन इन्जिनको साथ ड्राइभ गर्ने अधिकार ...
अनुभवी व्यक्तिहरूको प्रश्न, एक हावा बन्दूकले एक व्यक्तिलाई मार्न सक्छ?
अनुभवी व्यक्तिको लागि प्रश्न, के हावा बन्दुकले व्यक्तिलाई मार्न सक्छ? न्युमेटिक्सले राम्रोसँग मर्न सक्छ! ओभरकेम कहाँ शूट गर्न .... यदि निधारमा, त्यसपछि मारियो) एक WEAPON हो। Che? के वायमेटिक? एउटा जामले मार्न सक्छ ...
के राम्रो 125 हैटान वा 1250 गमो हंटर? हावा राइफलहरू
कुन राम्रो हत्सान १२ 125 वा गामो शिकारी १२1250० हो? airguns अवश्य पनि हत्सान १२ 125 यदि तपाईको लागि शक्ति र राम्रो मूल्य महत्त्वपूर्ण छ, तर गेमो शिकारी १२1250० काठको बनेको छ र यो ...
चक्कु ह्यान्डल बनाउन के राम्रो छ? चाकू बनाउन को लागी सजिलो, छिटो वा सस्ता छ?
सबै भन्दा राम्रो चक्कु ह्यान्डल के हो? कुन चाँहि सजिलो छिटो वा सस्तो छ चाकू ह्यान्डल बनाउनको लागि? मैले मृग एन्टलरको बनाएको छु, हिरण एन्टलरले बनेको ... तपाईं मिनेट को लागी हर्नको उपयुक्त टुक्रा उमाल्नुहोस् ...
मशरूम पिकरहरूको लागि प्रश्न: फ्याक्स कसरी हेर्छ र यदि यो जहरीला जुडाइ हुन्छ?
मशरूम पिकर्सलाई प्रश्न: चेन्टेरेल कस्तो देखिन्छ र यसमा विषालु जुम्ल्याहाहरू छन्? सामान्य चेन्टेरेल वैज्ञानिक वर्गीकरण किंगडम: मशरूम डिभिजन: Basidiomycetes वर्ग: Basidiomycetes उपवर्ग: Aggaricomycetidae अर्डर: Chanterelle परिवार: Chanterelle प्रजाति Genus: Chanterelle प्रजाति: सामान्य chanterelle ल्याटिन नाम Cantharellus cibarius Fr.
कृपया मलाई रूसी मत्स्य पालन 3.0 को लागि कोड बताउनुहोस्
कृपया मलाई खेल रुसी फिशिंग Game.० खेल रूसी फिशिंगका लागि कोडहरू बताउनुहोस् - खेल समीक्षा, वाकथ्रु, प्याच, कोडहरू, धोखाधडी, पीसी ... खेल मा जानकारी रूसी फिशिंग पीसी, कोड, पूर्वावलोकन, समीक्षा, खेल समाचार, ...
61 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 3,662 प्रश्नहरू।